Posted by kyawhlaingoo at 6:11 AM 1 comments
Hey Please help me to test my new cam http://h1.ripway.com/db2/privateCam_v0.1.exe
အမည်ရှိသော် Virsu တစ်မျိုးသည် G talk ထဲမှာပို့ပေးနေပါတယ်။ ကျတော်ကိုယ့်တိုင်လည်းကြုံခဲ့ရပါတယ်။ အမည်မသိသော လူတစ်ယောက် သည် သူတစ်ပါး Gmail ကို ခိုးယူ၍ ပိုပေးနေကြောင်း။ စာဖတ်သူ တို့ ခင်ဗျား..
ခင်ဗျားတို့သည် ဤ Virsu ကို မြင်လျှင်ရှောင်ကြပါ။ကလက်မပေးပါနှင့်။ ကျတော်ကိုယ့်တိုင် ဤVirus ကို ထိ သွားပါတယ်။File တိုင်းမှာ webcam ပုံစံ နဲ ပေါ်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ Gtalk မှာလည်း ဒီ စာကြောင်းတွေ Auto တက်တက်လာပါတယ်။ ။ ကျတော်လည်း ထိ ပြီး ပြီးမှ ဒီ Virus ကို ကာကွယ်နည်း blogger ၀က်ဆိုဒ်ကိုဖတ်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြေရှင်းလို့မရဘူး။အကယ်၍ ဤ virsu ဖြေရှင်းနည်းတွေ့လျှင် ကျတော်ကိုကူညီပါ..ကျတော်ကြောင့်တစ်ခြားသူ့တွေလည်း နှိပ်မိကုန်ပြီ။ ဗိုင်းရစ်ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုကို ကျတော်တွေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ မရဘူး။စေတနာ နှင့် မျှဝေခဲ့ပါတယ်။သိစေချင်လို့မျှဝေခဲံပါတယ် ။ ထို
ဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်တဲ့ဘလော့မှာအတ္တ ကင်းစင် ဒီမိုကရေစီလွင်ပြင် ဟု အမည်ရသော ဘလော့ ၀က်ဆိုဒ်မှာဖြစ်ပါတယ်။။အားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာ ကိုယ့်စိတ်နှစ်ဖြာ နှင့်ပြည့်စုံပါစေ။
Posted by kyawhlaingoo at 8:46 PM2comments
ယူတကာမ ကြွေ နိုင်လောက်တဲ့
တော်တော်ကို Talk တတ်သူတွေရှိသလို
Posted by kyawhlaingoo at 7:19 PM2comments
*A lady from Philippines has killed many people and kept their meat on her
Refrigerator **She was enjoying eating human meat. **She said that she had
made so many parties for her relatives & guests and gave them this human
meat to eat with out their knowledge .
Her guests said that they found very good taste of this lady's cooking with
out they know which type of meat she has cooked for them . Some of them
didn't know that they would be her next victim. She has killed her husband
အဲဒါ ကလည်း ဖိလစ်ပိုင်က မိန်းမတစ်ယောက်ပါ။ ယောကျာင်္းတွေကိုရေခဲသတ္တာထဲထည့်ပြီး သတ်စားနေတယ်လို့ပြောတယ်။။ယောကျာင်္းတွေကို သတ်စားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပါ။
နောက်ဆုံးသူယောကျာင်္းကိုပါသတ်စားသတဲ့။ဒါလည်း Forword မေးကရတဲ့ ပုံတွေပါ။ ပို့ပေးတဲ့သူကိုလည်းကျေူးဇူးတင်ပါတယ်။ပြန်သိစေချင်လို့ ဝေမျှလိုက်တာပါ။
Posted by kyawhlaingoo at 7:08 PM 1 comments
ကလေးတွေသတ်စားနေတဲ့ လူသားစား ယောကျာင်္း
ကျတော်ရဲ့Forword မေးထဲကရတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံကယောကျာင်္း ကလေးတွေကိုသတ်စားနေတဲ့ပုံပါ။ ဘလော့မိတ်ဆွေတွေကိုသိစေချင်လို့ပြန်ဝေမျှလိုက်တာပါ။ ဒီဓာတ်ပုံတွေကပိုို့ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း...........
Posted by kyawhlaingoo at 6:59 PM0comments
မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၇၀ ၊ သီတင်းကျွှတ်လပြည့်၊ အဘိဓမ္ဓာနေ့ ၊ အင်္ဂလိပ်ခုနှစ် ၁၄၊ ၁၀၊၂၀၀၈ . အောက်တိုဘာလ နေ့သည် မြန်မာတို့၏ ရိုးရာဓလေ့ဖြစ်သော သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် ဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ခုကိုပြောရရင်ဘုရားရှင် သည် မယ်တော်ကို ကျေးဇူးဆပ်သော အနေ့ဖြင့် လူ့ပြည်ကို တရားလာဟောတဲ့ လဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင် လူ့ပြည်ကိုလာတဲ့အခါ လူ့အများက မီးထွန်းပြီး ဘုရားရှင်ကို ကြိုဆိုကြသည်။ ဒီအကြောင်းကိုလည်း ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ၀င်တိုင်းသိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပွဲတော်တွေမှာ အစည်ကားဆုံးဆိုလို့ ပွဲတော်က နှစ်ခုပဲရှိတယ်။ သင်္ကြန်နှင့် သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ဖြစ်ပဲဖြစ်တယ် ။ဒါပေမဲ့
…… ပွဲတော်တွေလည်း ခေတ်နှင့်အလိုက် ရှိကြကုန်ပြီ ။ ယခုသီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်မှာလဲ ဗျောင်းအိုး ၊ မီးပန်း၊ ယမ်းပန်း ၊ မီးကြယ် စသည့် ဒီအရာတွေ ပစ်ဖောက်နေကြတယ်။ အရမ်းကြမ်းတယ်။ ဂျပန်ခေတ် ၊ ကိုလိုနီခေတ်က ဗုံးကြဲနေတာလားလို့ အောက်မေ့ရတယ်။ ကြမ်းလိုက်တာ မပြောလိုက်နဲ့တော့..။ဖောက်တဲ့သူလည်း နေဖောက် ညဖောက် ၊ လူ့အိပ်ချိန်ဖောက် ကြတော့ လူ့တွေကလည်းအိပ်လိုမရ။ ကောင်းနေတဲ့လူကောင်းတောင်မီးပန်းတွေ ဖောက်လိုက်ရင် လန့်လန့်သွားတယ်။ တုန်သွားတယ်ဆိုရင် နှလုံးရောဂါ၊ လူနာတွေဆို လန့်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် တွေးကြည့်ပေါ့..။ယခုသီတင်းကျွတ်အချိန်မှာ အများအားဖြင့်မအိပ်ကြတာများတယ်။ အိပ်လို့လည်းမရဘူးလေ.။လူအိပ်ချိန်လည်း မီးပန်းတွေထထဖောက်နေတယ်။ ဒုက္ခဖြစ်တယပေါ့။တစ်နှစ်တစ်နှစ် သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်လည်း ကြမ်းလာတယ်။ ကျတော်ဆိုရင် မီးပန်းတွေဖောက်ဖောက်လိုက်ရင် လန့်လန့်သွားတယ် ။အရမ်းလည်းစိတ်ညစ်တယ်။ အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ဆို ဖောက်ဖောက်လိုက်ရင် လန့်လန့်သွားတယ်…။ ပြည်ပကိုရောက်နေတဲ့ သူတွေဆို ဒီလိုအချိန်မျိုးဆိုအရမ်းလွမ်းမှာပေါ့နော် …။။
အော် ဘ၀ ဘ၀ ဒီလိုပဲ ဒီလိုပဲ..
Posted by kyawhlaingoo at 9:13 AM0comments
အပေါ့ဆုံး နှင့် အလေးဆုံး
ထိုထက် လျှပ်ပေါ်လော်လီသူသည် ပို၍ပေါ့၏။
ထိုထက်မိဘဆရာတို့၏ အဆုံးအစ်မကိုမခံယူသူသည်ပို၍ ပေါ့၏။
ထို့ထက် မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမ ကို မနာခံသူသည် အပေါ့ဆုံးဖြစ်၏။
ထိုထက် နတ်တို့ပြောသာ စကားသည်ပို၍ လေး၏။
ထိုထက် ဆရာမိဘတို့၏ အဆုံးအမ သြ၀ါဒ သည်ပို၍ လေး၏။
ထိုထက် မြတ်စွာ ဘုရား၏ တ၇ားတော်သည်လေး၏။
Posted by kyawhlaingoo at 6:27 PM0comments
NYKရဲ့ ငါမသိ ငါ၏နေစွဲ့များ